Ny fanabeazana tao amin'ny fiangonana voalohany
Lesona 8:Ny fanabeazana sy ny drafi-panavotan'Andriamanitra
Eto no ahitantsika ny iray amin'ireo fitsipika lehiben'ny fanabeazana ao amin'ny Soratra Masina, rehefa niomana handao ny mpianany, na ny mpanara-dia Azy, i Jesôsy, Ilay Tompo sy Mpampianatra. Niaraka Taminy nandritra ny telo taona sy tapany izy ireo, izany hoe mitovitovy amin'ny halavan'ny fotoana ianarantsika any amin'ny sekoly ambony. Matetika rehefa mifarana ireo fe-potoana ireo, miankina amin'ilay mpampianatra, dia azo lazaina fa efa vonona ny hitantana samirery ny fiainany ny mpianatra.
Nanan-kevitra tsara kokoa anefa i Jesôsy. Notohizany hatrany ny fanabeazana azy ireo tamin'ny nanomezany azy ny Fanahy Masina ho Mpampianatra. Ny teny hafa ilazana io mpampianatra na mpitari-dalana io ao amin'ny Baiboly dia Mpananatra na Solovava (paracletos amin'ny teny grika), izay homena ireo mpanara-dia an'i Jesôsy sy hitoetra eo aminy mandrakizay (Jao. 14:16,17). Fanahin'ny fahamarinana koa no ilazana Azy. Na dia tsy antsoina hoe mpanabe aza ny Fanahy Masina dia azo antoka kosa fa fanabeazana no asa ataony, indrindra amin'ny lafiny fikatsahana sy ny fahalalana ny fahamarinana.
Vakio ny 1 Kôr. 2:1-16. Inona no ambaran'i Paoly eto izay manan-danja lehibe ao amin'ny tontolon'ny fanabeazana?
Ny anombohan'i Paoly azy dia fampahatsiahivana ny fiangonana tao Kôrinto fa tamin'ny fotoana voalohany nahatongavany teo aminy, dia tsy niresaka afa-tsy ny amin'i Kristy sy Izy voahombo teo amin'ny hazo fijaliana izy (1 Kôr. 2:2) - tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fitoriana ny filazantsara ihany. Kanefa tsy nifarana hatreo izany (1 Kôr 2:6), satria rehefa avy nampianarina ireto Kristianina vaovao ireto, dia naniry hiverina indray ny apôstôly Paoly mba hampianatra azy ny amin'ny fahendrena, dia ilay zava-miafina, nafenin'Andriamanitra talohan'ny nanaovana izao tontolo izao (1 Kôr. 2:7), eny, ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza (1 Kôr. 2:10). Eo ambanin'ny fitarihan'ny Fanahy Masina no hianarana ny zavatra rehetra, rehefa mby ao an-tsain'ny mpianatra Izy.
Akory ny halalin'izany fianarana izany, sy ny halehiben'ny fahalalana mivelatra eo anoloan'ireo izay tarihan'ny Fanahy Masina! Mifarana amin'ity teny nambaran'ny mpaminany Isaia ity io toko io: "Iza no nanome hevitra ny Fanahin'i Jehôvah, ary iza no mpanolo-tsaina nampianatra Azy?" - Isa. 40:13. Raha niteny tamin'ny fitenin'ny olon-tsotra tamin'ny androny ny mpaminany dia ho nilaza izy fa tsy misy olona mahavita izany. Nahitsin'i Paoly anefa izany fomba fijery izany raha namarana izy hoe: "Fa izahay manana ny sain'i Kristy". Izany hoe ny Kristianina izay feno ny Fanahy Masina dia afaka ny hanana na ny sain'Andriamanitra aza, ary toy izany no hahazoany koa ny fahazavan-tsaina sy ny fahalalana rehetra araka izay ilainy (1 Kôr. 2:10-13) mba handrosoany amin'ny lalan'ny fahamarinana.